Cake Marble Oo Lagu Karbaashay Shukulaatada Ganache - Sugar Geek Show - Keega
Sida loogu rogo rooti karinta aan ugu jeclahay keega vaniljyada loo maro keega marmar qoyan oo qalafsan
Keega marmar qoyan iyo mid qalafsan oo laga sameeyay xoqan maahan inuu noqdo mid dhib badan. Marar badan, idinku waxaad i weydiiseen si fudud oo ah karinta keega marmar oo aan u baahnayn laba cunto oo keeg ah iyo baaritaan badan ka dib, waxaan ugu dambayntii kuu hayaa karinta keega marmar ee SAMAYSAN!
Maxaa loogu magac daray keega marmarka?
Keegga marmarka waxaa la sameeyaa markaad ku darto qadar yar oo ah midab madow oo midabkeedu mugdi yahay midab khafiif ah oo si khafiif ah u walaaq si aad u siiso keega muuqaal muuqaal ah
Fikradda isu-geynta laba baabur midabbo kala duwan leh oo keeg ah wuxuu ka yimid Jarmalka qarnigii sagaal iyo tobnaad. Keegga Marmar wuxuu ku sii jeeday Ameerika iyadoo ay la socdaan soo galooti Jarmal ah Dagaalkii Sokeeye ka hor. Asal ahaan keegaga waxaa lagu xardhay aalado iyo xawaash.
Sannadkii 1889, cunto-karin ayaa ka muuqatay buug caan ah oo ka faa'iideysanaya ku-mashquulidda Ameerika ee shukulaatada oo ku beddelay moolaska shukulaatada. Sidaa darteed, keeggii caanka ahaa ee marmarka lahaa ee aan maanta ka ogaannay ayaa dhashay.
Intii lagu jiray 50-meeyadii ilaa 70-meeyadii, rootiyada ku yaal New York halkaas oo lagu darayo soo-saarista yicib ee baytarkooda marmar sida dhadhan saxeex ah oo mararka qaarkoodna loo yaqaan keegga marmarka Jarmalka.
Maxaa ka dhigaya keega marmar qoyan?
Mar kasta oo aad ku soo bandhigeyso budada kookaha qashin karinta, way qalajin kartaa keegga. Ka fikir inta jeer ee aad leedahay keega shukulaatada qalalan?
sida loo sameeyo miro buluug ah oo lagu buuxiyo buluug cusub
Sidaas darteed waa muhiim inaad ubaxdo budadaada kookaha kahor intaadan kuqasan digaaga digaaga vanilj. Blooming waa markaad isku darto budada kookaha biyo kulul, kafee ama saliid qabow oo u oggolow inay fadhiisato daqiiqado ilaa ay ka bilaabaneyso inay u ekaato isbuunyo.
Hadda oo budada kookaha ay qoyan tahay, ma nuugi doonto dhammaan qoyaanka ka soo baxa dubitaanka keega vaniljkaaga.
Waxyaabaha kale ee keeggan ku jira oo qoyan
Caano subag - Ku dar qoyaan, dusha jilicsan iyo dhadhanka keega
Saliid - Waxay ka ilaalisaa keega marmar inuu qalalo wuxuuna ku daraa qoyaan
Ukunta oo dhan - Ukunta ukunta waxay ku dartaa qoyaan keega iyo waliba qaab dhismeedka
Sidee ayaad marble vanilla iyo shukulaatada shukulaatada?
Waxaa jira xoogaa farsamo ah marka ay timaado marmarka saxda ah. Dadka badankood ayaa si xad dhaaf ah u sameeya. Khiyaamada ayaa ah inaad kudariso baakadaada shukulaatada inta udhaxeysa laba lakab oo vanilj ah, ka dibna isticmaal mindi subag si aad u sameyso shay yar oo 8 dhaqdhaqaaq ah oo ka dhaqaaqaya dusha sare ee batteriga ilaa hoose.
waxa loo adeegsado in lagu qurxiyo keeg
Dhaqdhaqaaqani wuxuu jiidaa shukulaatada shukulaatada iyada oo loo marayo vaniljka waxayna umuuqataa qurux markaad goynaysid.
Kaliya ha yareynin marmar ama waxaad ku dambayn doontaa jeex jeexjeexa oo shukulaatada u eg.
Miyaad ku dubi kartaa keeggan digsiyada kale?
Waxaa la yaab leh, inbadan ayaan helayaa su’aashan. Cuntadani waxaa loogu talagalay in lagu dubo seddex 8 p digsiyada keega ah si aad ugu hesho seddex lakab oo fiican oo keeg ah jeex kasta. Laakiin waxaad xaqiiqdii isticmaali kartaa cabirro kale oo ah keega sida keega 1/4 ama digsiyada laba jibbaaran.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad kordhiso ama aad yareyso cuntada sida ay ugu habboon tahay cabbirka digsigaaga.
Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa cuntadan si aad u samayso a keeg xidhmo ama kibis shaqsiyeed. Kaliya raac nidaamka isku midka ah ee qaadashada 1/3 ee dufanka oo aad ku darto budada kookaha ubaxeed si aad u sameysid shukulaatada digaagga digaagga.
Keegga marmarka ayaa asal ahaan ka badnaa keeg fudud. Waxaa la doonayaa in la jarjaro oo loo adeego iyada oo aan dhaxan lahayn oo lagu cuno shaah ama keega kafeega u eg.
macaronku muxuu u eg yahay
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa cuntadan si aad u sameysid keega laakiin aad ayey u badan tahay! Keegahayga keega waxaa lagu dubay 350ºF ilaa 15 daqiiqo laakiin waa inaad karisaa ilaa bartamaha ay dib uga soo kabaneyso markaad taabato.
Sida loo qurxiyo keeg marmar ah
Haddii aad rabto inaad qurxiso keeggaaga marmar sida tayda oo kale, ka dib raac tallaabooyinkan fudud.
Samee ganackaaga shukulaatada ah oo u dhig si uu u qaboojiyo heerkulka qolka illaa uu ka gaaro isugeynta subagga lowska.
Kee keegaaga marmarka ah ka dibna midkood ku duub duub balaastig ah oo ku rid qaboojiyaha si uu u qaboojiyo habeenka ama u qaboojiyo 30 daqiiqo kahor qabowga. Iska yaree qubbada keega haddii aad mid leedahay.
Dhig lakabkaaga keega ugu horreeya saxankaaga dusha ka dibna ku faafi lakabka ganache qiyaastii 1/4 qaro weyn. Ku celi labada lakab ee ugu dambeeya.
Ku dabool keegga oo dhan lakab khafiif ah oo ganache ah oo loo yaqaan jaakad jajab ah. Keegga oo dhan ku rid qaboojiyaha 20 daqiiqo.
Diyaarso faleebadaada shukulaatada ah oo u daa qaboojiyaha 90 toF
Codso lakabkaaga ugu dambeeya ee ganache oo ku nadiifi spatula-kaaga miisaska iyo xoqidda keydka.
Adoo isticmaalaya burush jilicsan (cusub), ku mari qaar ka mid ah budada kookaha dusha ganacta si aad ugu ekaato inay leedahay qaab jilicsan oo jilicsan.
Ganacheyahaaga faleebada ah ku dhex rid boorsada dhuunta oo ka jar caaradda
Ku falee ganache dhammaan hareeraha dusha sare ee keega oo dhammee saydhaa grafitti .
Ma dooneysaa fikrado dheeri ah?
Keeg rootida rootida ah
Shukulaatada bundt shukulaatada
Keega jilicsan ee cad
Cunto macaan oo jilicsan oo marmar leh leh shukulaatada ganache frosting. Sameynta keega marmarka laga soo bilaabo xoqida ayaa ah mid aad u fudud, markaa ku macasalaameyso isku darka sanduuqa. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:40 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:822kcal
Cunnooyinka Cake Marmar
▢16 ounces (454 g) bur keeg
▢1 tsp cusbo
▢1 qaaddo shaaha Fixiso
▢5 ounces (142 g) saliidda cuntada
▢14 ounces (397 g) caano subag heerkulka qolka ama in yar diiran
▢8 ounces (227 g) subag aan cusbo lahayn oo jilicsan
▢laba qaaddo shaaha vanilj
▢1/2 qaaddo shaaha soo saar yicib
▢1 ounce (29 g) budada kookaha midab ama dabiici ah
▢3 ounces (85 g) biyo kulul
▢1 Miisaska cuntada budada kookaha u booris
▢16 ounces (454 g) shukulaatada nus-macaan
▢16 ounces (454 g) kareemka culus ee karbaashka
▢6 ounces shukulaatada nus-macaan
▢4 ounces kareemka culus ee karbaashka
Diyaarso seddex dherer 8'x2 'keeg ah oo leh keeg ama waxyaabo kale oo lagu buufiyo digsiga. Kuleyli foornadaada ilaa 335ºF
Biyahaaga kululee ilaa aad kareyso ka dibna ku dar budadaada kookaha. Walaaq ilaa budada kookaha ay qoyso. Waxay umuuqan doontaa buruud laakiin taasi waa caadi. Dhinac iska dhig oo u oggolow inuu qaboobo intaad diyaarinaysid bucshiradda keega.
Isku dar 3/4 koob oo caanaha ah iyo saliida isla markaana dhinac iska dhig.
Isku dar caanaha haray, ukunta, vaniljka, iyo soosaarka yicibta si wadajir ah, u garaac si aad ukunta u jajabiso oo aad dhinac u dhigto.
Weelka baaqigaaga qaso, isku dar bur, sonkor, budada dubista, soodhaha, iyo milixda ku lifaaqan daboolka. Isku qas 10 sekan si aad isugu darto.
Ku dar subaggaaga jilicsan burka isku dar oo isku walaaq hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn (qiyaastii 30 sekan).
Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar oo isku walaaq ilaa ay ka qalalan yihiin maaddooyinka qallalan. Ka dib xawaaraha ku kordhi dhexdhexaad (dejinta 4 ee KitchenAidkayga) oo u oggolow inuu isku qasmo 2 daqiiqo si loo horumariyo qaabka keegga. Haddii aadan u oggolaan keeggaaga inuu ku qasmo talaabadan keegaaga ayaa burburi kara.
Xaaq weelkaaga ka dibna xawaaraha hoos u dhig. Ku dar isku darka ukuntaada seddex qaybood, adoo u oggolaanaya in dufanka isku dhafan 15 ilbiriqsi inta udhaxeysa iskudarka.
Mar kale xoq dhinacyada si aad u hubiso in wax waliba ay isku darsameen.
Qaado 1/3 ee baytarigaaga oo ku dar isku darka isku darka shukulaatada oo si tartiib ah isku laab illaa inta la isku darayo.
Ku dar lakabkaaga digsiyadaada, adigoo ka bilaabaya vanilj, ka dibna shukulaato kuna dhammaada vanilj. Isticmaal mindi subag si aad si tartiib ah ugu wareejiso. Ha badin isku darka ama keegaagu ma lahaan doono gudaha gudaha marmar.
Kari 35-40 daqiiqo 335ºF ilaa caday la galiyay bartanka uu si nadiif ah uga soo baxo laakiin keeggu wali ma uusan bilaabin inuu ka gaabiyo dhinacyada dhinacyada saxanka. WAAR SI AAD UGU DHAQSAN AH QAADO QORAALKA Dushiisa mar si aad uumiga uga soo siiso keega. Tani waxay joojineysaa keegga inuu yaraado.
Keega ha ku qaboojino 10 daqiiqo gudaha digsiga ka hor intaadan tuurin. Keegga ayaa yara yaraanaya taasna waa caadi. Ku siib sariir qabooji oo si buuxda u qabooji. Waxaan qaboojiyaa keegayaga ka hor inta aanan gacanta ku dhigin ama waad ku duubi kartaa duubka balaastigga ah oo aad ku qaboojin kartaa si qoyaanka buskudku ugu soo dhacaan. Ku dhalaasho miiska dushiisa adoo weli ku duudduuban dhaxan ka hor.
Shukulaatadaada dhig weel aan diiranayn
Kariimkaaga kululee ilaa uu ka bilaabmayo inuu kululaado, ha karkarin haddii kale ganache-gaagu wuxuu noqon doonaa firidh.
Ku shub kariimka kulul shukulaatadaada oo u daa 5 daqiiqo
Ku dar faniinkaaga iyo milixda isku dar ah shukulaatada oo ku kari ilaa inta ay ka jilicsan tahay iyo kareemka
Meheradaada ku shub digsi gacmeed oo u daa qabow si ay u ahaato isugeynta subagga lowska. Miinadaydu waxay qaadataa ilaa 20 daqiiqo inay isku sii buurnaato.
Ku keydi keegaaga ganache ka dibna ku rid qaboojiyaha muddo 20 daqiiqo ah ka dibna ku boodbo boodhka kookaha adoo isticmaalaya burush jilicsan (cusub) oo qurxan si aad u sameysid maqaarka jilicsan
Kariim kululeyso illaa uumi uun ku shub shukulaatada. Fadhiiso 5 daqiiqo ka dib dhuuq ilaa ay ka siman tahay. U daa qabow ilaa xoogaa diirran taabashada ka hor intaadan ku tuurin keeggaaga 'CHILLED'.
Bedelka Buttermilk - caano caadi ah oo lagu daray 2 qaado oo khal ama liin dhanaan ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa caano budo ah. Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebinayn ama uusan curricamaynayn. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo farayn (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga kahor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey si wanaagsan haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isugeynta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si aan u raro. Wax badan ka baro qurxinta keegaaga ugu horeeya. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, ku beddelashada dhammaan ujeeddada bur iyo galleyda laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay caadi tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. Dhammaan ujeedada burku waa bur caadi ah oo aan lahayn wakiilo kacaya. Waxay leedahay heer borotiin ah 10% -12% Daqiiqda Keeg waa daqiiq jilicsan, oo bur ah borotiin ka yar 9% ama ka yar.
Ilaha rootiga keega laga helo: UK - Shipton Mills Cake & Pryy
U adeegida:1adeegaya|Kalori:822kcal(41%)|Kaarboohaydraytyada:73g(24%)|Protein:10g(labaatan%)|Dufan:56g(86%)|Dufan Dufan:36g(180%)|Kalastarol:150mg(konton%)|Sodium:455mg(19%)|Kalibaalium:463mg(13%)|Fiber:5g(labaatan%)|Sonkor:44g(49%)|Vitamin A:1162IU(2. 3%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyamka:138mg(14%)|Bir:3mg(17%)
Cunto qoyan oo Vanilla Bundt Cake ah
vanilj bundt karinta laga soo bilaabo xoq
sida loo dhigo ubax dhab ah keeg
karinta keega strawberry iyadoo la isticmaalayo isku darka keega cad
Cunto Cake Shukulaatada Jarmalka Caan ah
Keegga shukulaatada dhabta ah ee Jarmalka ayaa lagu sameeyay shukulaatada rootida macaan, subagga caatada ah waxaana ka buuxsamay buuxinta qumbaha qumbaha.
Cunto macaan oo jilicsan oo jilicsan
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa ka helaya dhadhanka caanaha iyo taabashada khal. Keeg qoyan oo jilicsan oo ku fiican munaasabad kasta oo gaar ah.